Niteraka fimenomenonana tamin’ny olona ny fahatapatapahan’ny herinaratra tamin’ireo lalao teo aloha, toy ny fifandonana tamin’ny RD Congo. Niakatra ny taham-pampiasana ny herinaratra satria samy mandefa ny fahitalavitra ny olona, hany ka tsy zakan’ny tosiky ny herinaratra intsony, raha ny fanazavana tsotsotra. Efa nilaza ny hitondra vahaolana sy mba hitsitsy ny fandaniana toy ny fampiasana zavatra matanjaka be ny Jirama mandritra io fotoana io, fa mba ny fahitalavitra ihany. Hisy ihany koa ny fiomanana amin’ny famahana olana haingana amin’ireo toerana sy faritra tena efa voamarika fa matetika misy olana ny famatsiana. Heverina izany fa hisitraka herinaratra ara-dalàna tsy misy olana ny rehetra rahampitso, ary hirariana mba tena hisy vahaolana tsy vonjy tavanandro fa maharitra. Raha ho an’ny omaly mantsy izao, dia toerana am-polony maro teto Antananarivo sy manodidina no nisedra fahatapahan-jiro.